ရုရွားကို ပိတ္ဆို့မဲ့ Sanction ဆိုတာ ??? – MMOnlineNews
ရုရွားကို ပိတ္ဆို့မဲ့ Sanction ဆိုတာ ???
ရုရှားကို ပိတ်ဆို့မဲ့ Sanction ဆိုတာ ???
ယူကရိမ်းကိစ္စနဲ့ပါတ်သက်ပြီးအနောက်အုပ်စုက ရုရှားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူပိတ်ဆို့ဖို့စတင်ဆောင်ရွက်နေကြပါပြီ၊ဥရောပကို ပို့တဲ့ဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းNord stream-2 အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်၊ယူကရိမ်းအကြပ်အတည်းဖြစ်ရင်Sanction နဲ့ထိပ်တိုက်တိုးမှာကို – ရုရှားဖက်က မပြင်ဆင်ထားဘူးတဲ့လား ?
– ဒိထက်မကပိုလာမဲ့ အရာကိုပါ မမျှော်ထားဘူးတဲ့လား ?Sanction ဆိုတာနိုင်ငံငယ်လေးတွေကိုသာဗိုလ်ကျချင်တိုင်း ဗိုလ်ကျလို့ရတဲ့ လုပ်ရပ်ပါ – ရုရှားဟာ ကမ္ဘာ့ စူပါစီးပွားနိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့မိတ်ဖက် လုပ်ထားတယ်၊
– EU တခုလုံးဟာ ရုရှားဓါတ်ငွေ့အပေါ် 42% မှီခိုနေရတယ် – အရေးပါသတ္တုတချို့ကို အဓိကဖြန့်ဖြူးပေးနေသူဖြစ်တယ်( ဥပမာ – ကြေးနီ )Sanction ချမှတ်တယ်ဆိုရာမှာနိုင်ငံအရွယ်အစားက စကားပြောလာခဲ့ပါတယ်
ရုရှားလို အင်အားကြီးနိုင်ငံအပေါ်အရေးယူခဲ့ရင်… တဖက်မှာ ဝက်ဝံကုပ်ခြစ်ရာကလဲဒါဏ်ရာပြန်ကြီးနိုင်ပါတယ်၊လောလောဆယ်ပဲကြည့်- ရေနံဈေး $95 + ဖြစ်သွားပါပြီ- အနောက်အုပ်စု စတော့တန်ဘိုး ပမာဏကြီးကြီး လေထဲပျောက်သွားပြီ၊
– စတိုးဆိုင်ကြီးတွေမှာ ( 7-25%) ဈေးတက်ကုန်ပြီ၊- အနောက်အုပ်စုကြားမှာ အကွဲအပြဲစဖြစ်ပြီ ( Sanction မှာ စွမ်းအင်မထဲ့ဖို့ တချို့ပြော )ရုရှားဟာအရင်ထဲက Sanction နဲ့ကြီးထွားလာသူပါ။သူ့အတွက် ဘာမှ မထူးဆန်းတော့ပါဘူး၊
ရုရှား တနိုင်ငံထဲ ဒဏ်ရာရမှာမဟုတ်ပါဘူးလောလောဆယ် စွမ်းအင်ကိစ္စမှာတင်ကုန်ဈေးနှုံးကြီးတဲ့ဒါဏ်ကိုအနောက်အုပ်စုက စခံရနေပါပြီ။နိုင်ငံရေးစနစ်အရဘယ်သူက အရေးသာသလဲလို့တဆင့်တိုးကြည့်ရင်…
အနောက်အုပ်စုက လစ်ဘရယ်လ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေ ‘ထ’ အော်တဲ့ဒါဏ်’ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေ ‘ ကိုအစိုးရတွေဦးဆုံး ရင်ဆိုင်ကြရပါလိမ့်မယ်၊လောလောဆယ်မှာကိုပဲထရပ်ကားသမားတွေရဲ့ ဆန္ဒပြမှုကကနေဒါကနေ အမေရိကန်ကိုကူးလာခဲ့ပါပြီ..သမိုင်းတွင် ‘၃၈,၀၀၀’ ရှိပါသတဲ့၊
နောက်ဆုံးမှာတော့အနောက်အုပ်စုဟာ ရုရှားကိုထိခိုက်နာကျင်စေဖို့ Sanction လုပ်ရာမှာသူတို့ကိုယ်တိုင် ဒါဏ်ရာများစွာနဲ့အဆုံးသတ်သွားကြပါလိမ့်ဟု သုံးသပ်ရင်း တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
← ပါကစ္စတန်သို့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများတငိပို့ရောင်းချပေးခြင်းမှသည် တရုတ်၏ အိန္ဒိယအပေါ် တစ်ဖက်လှည့်ခြိမ်းခြောက်လာမှု့
ယူကရိန်းပြည်သူတွေ အစိုးရ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တရားဝင်လက်နက်အရောင်းဆိုင်တွေမှာ တိုးကြိတ်ပြီး လက်နက်များ ဝယ်ယူနေကြပါပြီ →